गाउका ‘बिधालय’ को हालत , शिक्षकलाइ नै ‘अङ्ग्रेजी’ बिषयको नाम लेख्न नआएपछी…
अहिले एउटा विद्यालयको भिडियो निकै च-र्चा-मा छ । सल्यानको एक सामुददायिक विद्यालय पढाउने शिक्षक लाई लेख्न नआएको भिडियो निकै च-र्चामा छ ।
एक यूटुवर सो विद्यालयमा पुगेर, विद्यालयमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकालाई ड्रेस कि-न न-लगा-एको भन्दै सो-धेका छन् । यस्तै विज्ञान र गणित विषय पढाउने शिक्षिकालाई विज्ञान र गणीत विषयको स्पेलिङ अंग्रेजीमा लेख्न लगाएका छन् ।
तर शिक्षिकाले ले-ख्न न-जानेपछि सो भिडियो च-र्चा-मा रहेको हो । सो भिडियोलाई कतिपयले राम्रो भनेका छन् भने कतिपयले पत्रकारको चर्को आ-लो-च-ना गरेका छन् ।
कतिपयले भने शिक्षिका, स्थानिय सरकार र शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि आ-लो-च-ना गरेका छन् । यसैविषयमा एक जना पुस्कर डेवान नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताले राम्रो अनुगमन तर सम्बन्धि निकाय ले अनुगमन गरेको भए बेस हुने थियो
तर युतुबरे लिएको अलिक मिलेन भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् भने महेन्द्र विके नाम गरेका एक जनाले संबंधित निकायको ध्यान जाओस। दुइचार जनाले जागीर पाएर आफ्ना बच्चालाई
सहरका राम्रा स्कुलमा पढाउदैमा शैक्षिक सुधार हुदैन भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । यग्यराज ओझाले भने यो प-तुर-कार को हो ?
बिद्यालय हाता भित्र जाने अधिकार कसले दियो ?
शिक्षकले पढाउन सके सकेनन् त्यो हेर्ने निकाय छ त्यस संग समन्वय बि-नै यसरी क-सैको ब-द-ना-मी गर्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
२०७८ भाद्र १०, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 394 Views